Abasolwa ngokudlwengula ematekisini kulindeleke bavele enkantolo | News24
Abasolwa ngokudlwengula ematekisini kulindeleke bavele enkantolo
Johannesburg – Abasolwa abahlanu abamataniswa namacala angu-13 okudlwengula nokubamba inkunzi ematekisini eGoli ngoMashi kulindeleke bavele ezinkantolo ezahlukene ngenyanga ezayo.
Abasolwa, abaneminyaka ephakathi kuka-24 no-35 ubudala, kulindeleke bavele ngokwahlukana enkantolo yaseKliptown, eyaseProtea kanye neyaseGoli, kanti bamataniswa nezigameko ezingu-13 kwezingaphezu kuka-20 okuphenywa ngazo, ngokusho kwesitatimende.
Ithimba elisebenza ngokuzimisela elaqokwa ukhomishana wamaphoyisa eGauteng lilandela imikhondo, kusho okhulumela amaphoyisa uColonel Lungelo Dlamini.
OLUYE UDABA: Kugwetshwe iphoyisa ngokugwazelwa
UDlamini uthe esitatimendeni ithimba liphinde lathola ukuthi izigameko eziyisithupha zokudlwengula ezenzeka eMoroka, enkabeni yeGoli, eBooysens naseKliptown kungenzeka ukuba zenziwa ngumsolwa oyedwa kanti balandela imikhondo ukumthola.”
Umsolwa oyedwa omataniswa namacala amabili nowaboshwa ngoJuni kulindeleke avele eNkantolo kaMantshi eProtea eSoweto, ngomhlaka 18 kwephezulu.
Amaphoyisa akhiphe umehlokaboni ozonokwa onemininingwane engaholela ekuboshwe kwabasolwa abasagwele izinkalo.